Mose hyiraa mmusuakuw no (1-29)
Yehowa “basa a ɛwɔ hɔ daa” (27)
33 Ansa na nokware Nyankopɔn nipa Mose rebewu no, eyi ne nsɛm a ɔka de hyiraa Israelfo no.+ 2 Ɔkae sɛ: “Yehowa fi Sinai bae,+Na ofi Seir hyerɛn wɔn so. Ɔhyerɛn fii Paran mmepɔw so,+Ná ahotefo mpempem pii ka ne ho,+Na n’asafodɔm wɔ ne nsa nifa so.+ 3 Ɔdɔɔ ne man;+Wɔn akronkronfo nyinaa wɔ wo nsam.+ Wɔbɛtenatenaa wo nan ase;+Wobetiee w’asɛm.+ 4 (Mose maa yɛn ahyɛde,Mmara a ɛyɛ Yakob asafo no agyapade.)+ 5 Ɔbɛyɛɛ ɔhene wɔ Yesurun*+Bere a ɔman no mpanyimfo+Ne Israel mmusuakuw nyinaa+ hyiae no. 6 Ma Ruben ntena ase, mma n’ase nnhyew,+Na mma ne fi mmarima so nntew.”+ 7 Na ohyiraa Yuda sɛ:+ “O Yehowa, tie Yuda+ adesrɛ,Na san fa no bra ne nkurɔfo mu. Ɔde ne nsa abɔ n’agyapade ho ban;*Boa no ma onni n’atamfo so nkonim.”+ 8 Nea ɔka faa Lewi ho ni:+ “Wo* Tumim ne wo Urim+ no yɛ nea odi wo nokware no dea;+Ɔno na wosɔɔ no hwɛe wɔ Masa no.+ Wo ne no dii asi wɔ Meriba nsu no ho.+ 9 Ɔno na ɔka kyerɛɛ ne papa ne ne maame sɛ, ‘Minnim mo.’ Ne nuanom mpo ɔpoo wɔn,+Na ne mma nso, wankogyina wɔn afã. Odii w’asɛm so,Na okuraa w’apam mu.+ 10 Ma wɔmfa w’atemmusɛm nkyerɛkyerɛ Yakob+Na wɔnkyerɛ Israel wo Mmara.+ Ma wɔnhyew aduhuam mmɔ afɔre huamhuam mma wo,*+Na wɔmmɔ ɔhyew afɔre wɔ w’afɔremuka so.+ 11 O Yehowa, hyira no ma onnya ahoɔden,Na ma w’ani nnye ne nsa ano adwuma ho. Wɔn a wɔsɔre tia no no, bubu wɔn nan mu,*Sɛnea ɛbɛyɛ a n’atamfo rensɔre bio.” 12 Nea ɔka faa Benyamin ho ni:+ “Ma nea Yehowa dɔ no no ntena ne nkyɛn dwoodwoo;Ɔmmɔ ne ho ban da mu nyinaa,Na ɔmfa no nsi akɔnkɔn.” 13 Nea ɔka faa Yosef ho ni:+ “Yehowa nhyira n’asaase,+Na ɔmma no nneɛma pa a efi soro,Obosu, ne nsu a efi fam.+ 14 Ɔmma no nneɛma pa a owia ma enyin,Na ɔmma no nnɔbae papa a bosome biara obetwa.+ 15 Ɔmma no tete mmepɔw* so nneɛma a eye,+Ne nkoko a etim hɔ daa so nneɛma pa. 16 Ɔmma no asaase so nneɛma pa ne nneɛma a ayɛ mu ma nyinaa bi,+Na onnya nea oyii ne ho adi wɔ nwura* a ɛredɛw mu no+ anim dom. Eyi nyinaa mmra Yosef so;Ɛmmra nea wɔpaw no fii ne nuanom mu no so.+ 17 N’anuonyam te sɛ nantwinini abakan,Na ne mmɛn yɛ ɛkoɔ* mmɛn. Ɛno na ɔde bepiapia* aman,Na wɔn nyinaa akogu asaase ano. Ɛno ne Efraim mpempem+Ne Manase mpempem.” 18 Nea ɔka faa Sebulon ho ni:+ “O Sebulon, ma w’ani nnye w’akwantu mu,Isakar nso, ma w’ani nnye wɔ wo ntamadan mu.+ 19 Wɔbɛfrɛ nnipa akɔ bepɔw so. Ɛhɔ na wɔbɛbɔ trenee afɔre. Na wobɛtwe* ɛpo mu agyapade bebreeNe anwea mu ademude* a ahintaw.” 20 Nea ɔka faa Gad ho ni:+ “Nhyira nka nea ɔbɛtrɛw Gad ahye mu.+ Ɔda hɔ te sɛ gyata,Na basa ne eti na ɔrebɛtew afi so. 21 Ɔbɛpaw nea edi kan,+Ɛhɔ ne ne kyɛfa a mmarahyɛfo de maa no.+ Na ɔman no mpanyimfo behyia. Ɔbɛda Yehowa trenee adi,Ne n’atemmusɛm a ɛfa Israel ho.” 22 Nea ɔka faa Dan ho ni:+ “Dan yɛ gyata ba.+ Obehuruw afi Basan.”+ 23 Nea ɔka faa Naftali ho ni:+ “Yehowa adom abu so ama Naftali,Na ne nhyira ayɛ no ma. Fa atɔe fam ne anaafo fam asaase di so.” 24 Nea ɔka faa Aser ho ni:+ “Wɔde mma ahyira Aser. Ma ne nuanom nnye no ntom,Na ɔmfa ne nan mmɔ ngo mu.* 25 Dade ne kɔbere na ɛbrambram w’aponkɛse akyi,+Na wo nkwa nna nyinaa wobɛtena ase dwoodwoo. 26 Obiara nni hɔ a ɔte sɛ Yesurun+ Nyankopɔn* no;+Ɔno na ɔfa wim bɛboa wo,Na ɔnam omununkum mu wɔ n’anuonyam mu.+ 27 Onyankopɔn ne wo guankɔbea fi tete;+Ne basa a ɛwɔ hɔ daa no kura wo mu.+ Ɔbɛpam w’atamfo afi w’anim,+Na ɔbɛka sɛ, ‘Sɛe wɔn!’+ 28 Israel bɛtena hɔ dwoodwoo,Na Yakob abura bɛtena hɔ kommWɔ asaase a hwiit* ne bobesa foforo wɔ so so.+Obosu befi soro asosɔ ama no.+ 29 O Israel, ma w’ani nnye!+ Hena na ɔte sɛ wo?+Ɔman a wɔwɔ Yehowa nkwagye,+Ɔno ne wo kyɛm a ɔbɔ wo ho ban+Ne wo sekan kɛse. Enti w’atamfo ho bɛpopo w’anim+Na wo de, wubetiatia wɔn so.”*
^ Anaa “Ɔde ne nsa ako ama n’agyapade.”
^ Asɛmfua “Wo” a ɛwɔ nkyekyɛm yi mu no gyina hɔ ma Onyankopɔn.
^ Nt., “wɔ wo hwene mu.”
^ Anaa “wɔn dwonku.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “apuei fam mmepɔw.”
^ Anaa “bɛpempem.”
^ Anaa “wobefew.”
^ Anaa “akorade.”
^ Anaa “ɔmfa ngo nhohoro ne nan ho.”
^ Anaa “Yesurun nokware Nyankopɔn.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wubetiatia wɔn mmepɔw ne wɔn nkoko so.”